चार कोठाको घर बनाउन सिमेन्टमा कति खर्च लाग्छ? :: Setopati
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, माघ १९
घर बनाउन सिमेन्ट अत्यावश्यक सामग्री हो। सहरी क्षेत्रमा मात्रै होइन ढुंगा-माटोले बन्ने गाउँका घरमा पनि सिमेन्टले स्थान ओगट्न थालेको छ।
बजारमा मुख्यतः दुईथरि सिमेन्ट पाइन्छ- ओपिसी (अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट) र पिपिसी (पोर्टल्यान्ड पोज्जोलोना सिमेन्ट)। सिमेन्टका प्रकार, विशेषता र काम गर्ने तरिकाबारे हामीले अघिल्लो स्टोरीमा चर्चा गर्‍यौं।
पढ्नुस्ः घर बनाउँदा कुन सिमेन्ट प्रयोग गर्ने? के छ ओपिसी र पिपिसीको विशेषता
घर बनाउँदा सिमेन्टमा कति खर्च लाग्ला भन्ने धेरैलाई चासो हुन सक्छ।
यहाँ हामीले काठमाडौंमा आठ सय वर्गफिटमा बन्ने चार कोठे, एकतले ढलान घर बनाउन चाहिने सिमेन्ट र त्यसको लागतबारे चर्चा गरेका छौं। यसबारे हामीलाई इञ्जिनियर तथा निर्माण कम्पनी 'बिल्ड इनोभेसन' का सिइओ अनोज खतिवडाले जानकारी दिएका छन्।
यो पनि पढ्नुस्ः आरामदायी घर बनाउन कति क्षेत्रफल आवश्यक पर्ला?
‘अहिले एकतले मात्रै बनाए पनि पछि तला थप्ने सोचेर धेरैले जग त्यहीअनुसार बलियो बनाउँछन्,’ ग्राहकको मनासायबारे उनी भन्छन्, ‘त्यसैले पछि थपिने तलाको तुलनामा पहिलो तलामा सिमेन्टको लागत धेरै पर्छ।’
यसरी आठ सय वर्गफिटमा बन्ने चार कोठाकको एकतले घरमा ओपिसी र पिपसी गरी करिब सात सय बोरा सिमेन्ट लाग्छ।
अहिले ओपिसीको बजारमूल्य प्रतिबोरा सात सय पचासदेखि आठ सय रूपैयाँ छ। त्यस्तै प्रतिबोरा छ सय पचासदेखि सात सय रूपैयाँसम्म पिपिसी पाइन्छ। साधारणतया ओपिसीभन्दा पिपिसी सय रूपैयाँ सस्तो पर्छ।
यो हिसाबले ओपिसीमा दुई लाख ६३ हजारदेखि दुई लाख ८० हजार रूपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। त्यस्तै पिपिसीमा दुई लाख २८ हजारदेखि दुई लाख ४५ हजार रूपैयाँसम्म लाग्न सक्छ।
माथिको मूल्य र आवश्यक सिमेन्ट मात्रालाई आधार मान्दा चार कोठाको एकतले घर बनाउन दुवैथरि सिमेन्टमा करिब पाँच लाखदेखि पाँच लाख पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म खर्च हुन्छ।
‘यो अनुमानित लागत हो। दस–बीस बोरा तलमाथि पर्न सक्छ,’ इञ्जिनियर खतिवडाले प्रस्ट्याए, ‘पिलर र बिमको आकारले पनि सिमेन्ट कति चाहिन्छ भन्नेमा अलिकति फरक पार्छ। नौ वटा पिलर र बाह्र वटा पिलर राख्दा लगानी तलमाथि पर्छ।’
सामान्यतया सिमेन्ट बनेको मितिबाट तीन महिनाभित्र प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सिमेन्टको मिति हेर्न अरू उत्पादनभन्दा अलि फरक छ। यसमा उत्पादन गरिएको हप्ताअनुसार मिति लेखिएको हुन्छ।
त्यसैगरी सिमेन्टको बोरा ठीक छ कि छैन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। बोरा प्वाल परेको भए सिमेन्ट कम हुन पनि सक्छ। संरचना निर्माण गर्दा स्थलमा ल्याएको सिमेन्ट ओस नपर्ने ठाउँमा भण्डारण गर्नुपर्छ।
सिमेन्ट भण्डारण गर्दा भुइँमा काठको फलेक वा चिसो रोक्ने सामान ओछ्याउनुपर्छ। पानी पर्दा भण्डारण गरिएको कोठामा पानी पस्छ कि पस्दैन भनेर पनि चनाखो हुनुपर्छ। पानी पसेमा सिमेन्टको गुणस्तरमा ह्रास आउनुका साथै प्रयोग गर्नै नमिल्न सक्छ। यस्तो सिमेन्ट प्रयोग गरेमा उप्किने वा संरचना कमजोर हुन्छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १९, २०७७, ०५:१७:००